Taliska AMISOM oo sheegay inay baaritaano ku sameyn doonaan warar ay baahiyeen warbaahinta Soomaalida – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Taliska AMISOM oo sheegay inay baaritaano ku sameyn doonaan warar ay baahiyeen warbaahinta Soomaalida
War-qoraal ah oo kasoo baxay taliska howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in baaritaan dheeraad ah lagu sameyn doonno eedeymaha ku saabsan in ciidanka Itoobiya ee AMISOM ay maalintii Arbacada ahayd ee lasoo dhaafay dileen ugu yaraan 7 qof oo shacab ah oo ku sugnaa deegaanka Daac oo ku yaala duuleedka degmada Ceel-buur ee gobolka Galgaduud.
Taliska AMISOM ayaa qoraalkaasi ay soo saareen ku sheegeen in ciidanka Itoobiya ee AMISOM oo kusii jeeday degmada Ceel-buur ee gobolka Galgaduud ay jidka u galeen dagaalyahanno ka tirsan Al-shabaab, halkaasna ay labada dhinac isku weydaarsadeen hubka noocyadiisa kala duwan.
Dagaalkaas kadib ayaa la sheegayaa in ciidamada Itoobiya ee AMISOM ay deegaanka ku dileen 7-ruux oo la sheegay inay dhamaantood ahaayeen dad shacab ah oo ku sugnaa deegaanka Daac ee ku yaala duuleedka degmada Ceel-buur ee gobolka Galgaduud.
“Waxaa taliska AMISOM soo gaaray eedeeymo ku aadan in ciidankeeda ay dileen 7-ruux oo shacab ahaa, waxaa wararkaasi baahiyay warbaahinta Soomaalida ah, AMISOM aad ayay kaga xun tahay wararka noocaas oo kala ah, waxayna ku sameyn doontaa baaritaano”. Sidaasi waxaa lagu yiri war-qoraal ah oo kasoo baxay taliska AMISOM.
Dhinaca kale, qoraalkaan kasoo baxay taliska AMISOM ayaa yimid, kadib markii la sheegay in ciidanka Itoobiya ee AMISOM ay 7-qof oo shacab ah si bareer ah ugu dileen deegaanka Daac ee ku yaala duuleedka degmada Ceel-buur ee gobolka Galgaduud.
Si kastaba ha ahaatee, ma ahan markii ugu horeeysay oo ay ciidanka Itoobiya oo ka midka ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya lagu eedeeyo inay dad rayid ah ku dileen gobolo ka tirsan Soomaaliya, xilliyadda ay weerarada kala kulmaan dagaalyahanadda Al-shabaab.